Abavelisi beTekhnoloji yeDiskrikhi yeeNokia - China Ifektri yeeTekhnoloji yeTekhnoloji yeTekhnoloji kunye nabaxhasi
Umthengisi we-Nokia SINAMICS G110
I-SINAMICS G110 inverter yidrayivu enemisebenzi esisiseko efanelekileyo kwiinguqulelo zesantya soshishino
Isiguquli sokuhamba rhoqo kwiyunithi yokuqhuba.
I-SINAMICS G110 inverter icekeceke ngokukodwa kwaye inikwe amandla sisigaba esinye sonikezelo lwamandla (200V-)
240V), kunye neempawu zolawulo lwevolthi.
Umthengisi we-Nokia SINAMICS G120
Isiguquli samaza SINAMICS G120 siyilelwe ukubonelela ngokuchanekileyo nangeendleko zokulawula isantya / torque yolawulo lweemotors zesigaba esithathu.
Ngeenguqulelo zeefowuni ezahlukeneyo (isakhelo sobungakanani be-FSA ukuya kwi-FSG) kuluhlu lwamandla ukusuka kwi-0.37 kW ukuya kwi-250 kW, kufanelekile kwizisombululo ezahlukeneyo zokuqhuba.
Umzekelo: SINAMICS G120, isakhelo sobungakanani be-FSA, i-FSB kunye ne-FSC; Inye nganye ineModyuli yaMandla, i-CU240E, i-2 F yoLawulo lweCandelo kunye nePaneli yabaSebenzi eyiBOP I-Nokia SINAMICS G120
INKQUBO YOKUXHASA INKQUBO YOKUQHUBA IINKQUBO ZESIMI
Ixabiso elipheleleyo lekhowudi
Indawo encoder enika indawo yenkqubo yedrive njengexabiso lokwenyani ngoko nangoko emva kokuba inikwe amandla Ukuba ngaba sisikhangeli esinye sokujika, uluhlu lokufumana umqondiso kukujika elinye; Ukuba sisikhowudi sokujija okuninzi, Uluhlu lokufumana umqondiso kukujika okuninzi (umzekelo, ukujika okungama-4096 kuqhelekile) .Xa ixabiso elipheleleyo lekhowudi lisetyenziswa njengendawo yokufaka ikhowudi, akukho mfuneko yotshintsho emva kokuvula, ngenxa yoko akukho tshintsho lwesalathiso (umzekelo, BERO ) Iyafuneka.
Kukho ii-encoders zexabiso elijikelezayo kunye nelinexabiso.
Icompact SINAMICS V20 kukuqhuba ngokulula ngokulandelelana okulula. Kuyamangalisa ukuguquguquka, kubandakanya amaxesha okugunyazisa ngokukhawuleza, ukomelela kunye nokusebenza kwamandla. Ngobungakanani beesakhelo ezisixhenxe, igubungela uluhlu lwamandla ukusuka kwi-0.16 ukuya kwi-40 Hp. Ukunciphisa iindleko zobunjineli, ukugunyazisa kunye nokusebenza kusentloko kuyilo lweSINAMICS V20. Skrolela ezantsi ukuze ubone indlela elula ngayo, ukuRuggedness, kunye nokuSebenza kweempawu ezisebenzayo ukwenza oku kube yeyona nto iqhuba kakhulu kwezoqoqosho kodwa inamandla kwiklasi yayo.Umthengisi weV20 we-Nokia